ဖိလစ်ပိုင်၏ gastronomy | ခရီးသွားသတင်း
မာရီယာဟိုဆေး Roldan | | ဖိလစ်ပိုင်, gastronomy, အာရှခရီးသွားခြင်း
ဖိလစ်ပိုင်၏ gastronomy သည်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားများနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အချက်အချာကျသောဓလေ့ထုံးစံများဖြစ်သည်။ ဤအစားအစာသည်အရှေ့တောင်အာရှနှင့်ဥရောပစပိန်ကဲ့သို့သောဥရောပအစားအစာများ၏လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးများသည်တစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်ထမင်းစားကြသည်။ almusal (နံနက်စာ)၊ tanghalian (နေ့လည်စာ) နှင့် hapunan (ညစာ), ထို့အပြင်နေ့လည်စာကိုရေစာဟုခေါ်သည်။ သူတို့သည်တစ်နေ့လျှင် ၆ ကြိမ်လည်းစားနိုင်သည်။
ဤအရာကိုဆိုလိုခြင်းအားဖြင့်ဖိလစ်ပိုင်တွင်အစားအစာနှင့်၎င်း၏ gastronomy အားလုံးသည်အစားအစာနှင့်၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်သာမက၎င်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်လည်းဆက်စပ်နေသည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
7 Pulutan ဆိုတာဘာလဲသိလား။
8 ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ
ဟစ်စပန်းနစ်မတိုင်မီကဖိလစ်ပိုင်၌ပထမဆုံးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှာရေတွင်ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ ရေပူခြင်းသို့မဟုတ်ကင်ခြင်းဖြင့်အချို့သောအစားအစာများကိုပြင်ဆင်ခြင်းတွင်သိသာသည်။ ဤနည်းလမ်းများသည် carabao (ရေကျွဲ)၊ နွား၊ ကြက်နှင့်ဝက်သားမှသည်ခွံငါး၊ ငါး၊ မလေးရှားသည်အာရှတွင်ဘီစီ ၃၂၀၀ မှစပါးစိုက်ပျိုးသည်။ ဂ ဟစ်စပန်းနစ်ခေတ်မတိုင်မီကကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများကိုတရုတ်၊ အိန္ဒိယတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည် ဖိလစ်ပိုင်အစားအစာတွင်တိုကျို (ပဲငံပြာရည်) နှင့် patis (ငါးငံပြာရည်) ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ လှုပ်ခါခြင်းနှင့်ကြော်သောနည်းနှင့်အာရှပုံစံဟင်းချိုများကိုပြင်ဆင်ခြင်းတို့ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
စပိန်လူမျိုးများရောက်ရှိလာချိန်တွင်အချို့သောအချက်အချာကျသည့်ဓလေ့ထုံးစံများကိုပြောင်းလဲစေပြီးငရုတ်ကောင်း၊ ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်၊ ပြောင်းဖူးနှင့် Stew ခေါ်သောကြက်သွန်ဖြူနှင့်အရသာရှိသောနည်းစနစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းကိုလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်အစားအစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။။ အချို့သောအစားအစာများကိုရှလကာရည်နှင့်နံ့သာမျိုးများဖြင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုယနေ့အသုံးပြုပြီးဒေသခံအစားအစာများတွင်စပိန်မှမိတ်ဆက်ပေးသည်။.
ဖိလစ်ပိုင်အစားအစာတွင်စပိန်ဟင်းလျာများနှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာနေထိုင်မှုရှိပြီး၎င်းတို့သည်အလွန်လူကြိုက်များသည်။ Paella ကဲ့သို့သောဖိလစ်ပိုင်ဘာသာပြန်ဗားရှင်းတွင် Valencian ဆန်၊ ဒေသခံ chorizo၊ escabeche နှင့် adobo မျိုးစိတ်များဖြစ်သည်။
၁၉ ရာစုအတွင်းတရုတ်အစားအစာသည်နယ်မြေတစ်လျှောက်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သောကိတ်မုန့်သို့မဟုတ်ခေါက်ဆွဲဆိုင်များ၌၎င်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ တခါတရံ arroz caldo (ဟင်းရည်ထဲ၌ဆန်နှင့်ကြက်သား) နှင့် morisqueta tostada (sinangag သို့မဟုတ်ဆန်ကြော်အတွက်သက်တမ်းဟောင်း) ရှိသည့်ဤနည်းများဖြင့်တစ်ခါတစ်ရံအမည်များကိုရောနှောပေါင်းသင်းနိုင်ခြင်း
၂၀ ရာစုအစတွင်အခြားယဉ်ကျေးမှုများပေါ်ပေါက်လာခြင်းကအခြားပုံစံများကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့၊ အမေရိကန်၊ ပြင်သစ်၊ အာရဗီ၊ အီတလီနှင့်ဂျပန်အစားအစာများ၏လွှမ်းမိုးမှုနှင့်အချက်အပြုတ်လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်များစတင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
သင်မှန်းဆခဲ့သည့်အတိုင်းဖိလစ်ပိုင်များသည်အစာစားခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်တစ်နေ့လျှင် ၃ ကြိမ်မှ ၆ ကြိမ်အစာစားနိုင်ပြီးအနည်းဆုံးအစာ ၃ လုံးနှင့်သရေစာ ၂ မျိုးစားနိုင်သည်။ အပြီးပြည့်စုံသောအစာသည်များသောအားဖြင့်ဆန် (ပေါင်းအိုးသို့မဟုတ်ကြော်) နှင့်အနည်းဆုံးထမင်းပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထမင်းကြော်ကိုမနက်စာစားချိန်မှာလုပ်လေ့ရှိတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင်အသုံးများသောချက်ပြုတ်နည်းမှာ adobo (ပဲပိစပ်၊ ကြက်သွန်ဖြူနှင့်ရှလကာရည်တွင်ချက်ပြုတ်သည်)၊ sinigang (tamarind အခြေစိုက်စခန်းနှင့်ပြုတ်)၊ nilaga (ကြက်သွန်နှင့်ပြုတ်)၊ ginataan (အုန်းသီးနို့နှင့်ချက်ပြုတ်) နှင့် pinaksiw တို့ဖြစ်သည်။ ဂျင်းနှင့်ရှလကာရည်တွင်) အားလုံးသည်အောက်ပါအစားအစာများဖြစ်သောဝက်သား၊ ကြက်၊ အသား၊ ငါးနှင့်တစ်ခါတစ်ရံဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုအသုံးပြုသည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိပြည်နယ်အသီးသီးတွင်နေထိုင်သူတစ် ဦး ချင်းစီနှစ်သက်သောအစားအစာများနှင့်ဟင်းပွဲများရှိသည်။ ဤဒေသဆိုင်ရာခဲဖွယ်စားဖွယ်များကိုပွဲတော်များတွင်ပြင်ဆင်လေ့ရှိသည် (ပွဲတော် (သူတော်စင်အားဂုဏ်ပြုသည့်ပွဲတော်)) နှင့်အချို့သည်အခြားနိုင်ငံများသို့တင်ပို့သည့်ဒေသများအတွက်အဓိက ၀ င်ငွေအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
ဖိလစ်ပိုင်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လမ်းရောင်းတဲ့သူတော်တော်များများဟာ mais (ပြောင်းဖူးချို)၊ အသားကင်၊ ဝက်သား၊ ကြက်၊ ငှက်ပျော၊ chicharrón (ဝက်သားအရေပြားသို့မဟုတ်နား၊ ကြက်သားအရေပြားသို့မဟုတ်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအသားများ)၊ ပြည်ကြီးငါးဘောလုံးများ၊ ငါးများ၊ ပြည်ကြီးငါး၊ ဥ၊ မြေပဲ , ကျော်ကြား Balut (ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဖြစ်ယူဆသည်ကြောင်းပြသမီးသန္ဓေသား), Hard- ပြုတ်ကြက်ဥ, ဆန်အသားညှပ်ပေါင် ... နှင့်ပိုပြီး။
Pulutan သည်အရက်ယမကာများဖြင့်စားသောအစားအစာဖြစ်သည်။ အရက်ကိုသောက်နေစဉ်အတွင်းသင်ဝယ်ယူရန်သင်ဝယ်ယူနိုင်သောစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုတွင်တွေ့နိုင်သည့်အရာအားလုံးနီးပါး။ လူကြိုက်အများဆုံး Pulutan များမှာခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်၊ ဝက်အူချောင်း၊ Baboy tokwa't (ပဲပုပ်ကြော်နှင့် tofu)၊ kikiam၊ ငါး၊ ပြည်ကြီးငါးသို့မဟုတ်ကြက်ဘဲ၊ ကြက်ကြော်၊ ကြက်ကင်ကြော် (squid rings) နှင့်အခြားအစားအစာများဖြစ်သည်။
သင်ဖိလစ်ပိုင်ကိုသွားမယ်ဆိုရင် gastronomy ဟာမင်းရဲ့တိုင်းပြည်မှာသင်သုံးတဲ့ဓလေ့ထုံးစံနဲ့မတူဘူးဆိုတာသိထားသင့်တယ်။ ဒါပေမယ့်ပွင့်လင်းတဲ့စိတ်နဲ့သင်ခံစားနိုင်ပြီးထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်နိုင်တယ်။ ထို့အပြင်သင်သည်ထောင့်စူပါမားကတ်တွင်ရှာဖွေနိုင်သော tour ည့်သည်များ၊ ပင်လယ်စာ၊ သက်သတ်လွတ်အစားအစာ၊ အသီးများစွာနှင့်အစားအစာများကိုနှစ်သက်သော၎င်း၏ gastronomy ဟင်းလျာများကိုသင်တွေ့နိုင်လိမ့်မည်။
ဖိလစ်ပိုင်ကိုသွားတဲ့အခါသင်ဘာစားရမယ်ဆိုတာကိုသိတယ်၊ လမ်းကုန်တိုက်တွေမှာတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုမကောင်းဘူးဆိုတာကိုသတိရပါ။ အနည်းငယ်ပိုပေးဆပ်။ ကောင်းသောအရည်အသွေးရှိသောအစားအစာများကိုစားသုံးခြင်းသည် ပို၍ တန်၏။ မင်းဟိုတယ်မှာနေမယ်ဆိုရင်မြို့ထဲမှာညစာစားဖို့ဒါမှမဟုတ်နေ့လည်စာမထွက်ခင်သင့်ကိုအကြံပေးပါမယ်ညစာစားရန်နှင့်စားသောက်ရန်လူကြိုက်များသောနေရာများနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်တောင်းရန်ဟိုတယ်မန်နေဂျာကိုမေးမြန်းပါ နှင့်ယခင်ကကျေနပ်ပြီဖြစ်သောခရီးသွား that ည့်သည်။ နေရာတွေကိုမသိဘဲကိုယ့်ဘာသာကိုယ်မသွားပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာလိုပဲ၊ သင်ဟာငွေပမာဏနဲ့စားချင်ရင်သင်ဘယ်သွားမလဲဆိုတာသိသင့်တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အာရှခရီးသွားခြင်း » ဖိလစ်ပိုင် » ဖိလစ်ပိုင်အစာအိမ်
Seville တွင်ကြည့်ရှုရန်7အခမဲ့အရာ